Bluboo XTouch Nyocha na Spanish | Gam akporosis
Anyị na-aga n'ihu na nyocha nke ụdị ọhụrụ nke njedebe gam akporo, na nke a na otu n'ime ụdị ndị na-enyekwu okwu na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, akara ahụ abụghị ihe ọzọ blueboo, a ika nke Chinese si na-enye anyị gam akporo ọnụ na dị ezigbo mma e ji mara na oru nkọwa na ihe karịrị gbanwee ahịa.
Na nke a anyị na-ewetara gị Bluboo XTouch na nyocha zuru ezu na nyocha vidiyo na Spanish nke mere na ị nwere ike ịchọta ihe niile nke onye ndu a dị egwu n'etiti etiti gam akporo na-enye anyị nkọwa kwesịrị ka ọ bụla dị n'etiti etiti ọ bụ ezie na ọnụahịa nwere ike ịbụ na njedebe ọ bụla nwere njedebe Android.
1 Bluboo XTouch nkọwapụta teknụzụ
2 Ihe kacha mma nke Bluboo XTouch
3 Ihe kacha njọ nke Bluboo XTouch
4 Ule igwefoto Bluboo XTouch
Bluboo XTouch nkọwapụta teknụzụ
Ihuenyo 5-anụ ọhịa IPS nwere mkpebi FullHD na 480 dpi
Nhazi Mediatek MT6753 nwere 64-bit Octa isi 1 Ghz teknụzụ
Nchekwa n'ime 32 GB gbasaa site na MicroSD ruo 64 GB kachasị ike
Igwefoto na-aga n'ihu Sony IMX214 16 mpx na okpukpu abụọ FlasLED autofocus na Optical Image Stabilizer
Igwe n'ihu 8 mpx Sony
Njikọ DualSIM 2G & 3G & 4G LTE GSM 850/900/1800 / 1900MHz - WCDMA 850/900 / 2100MHz - FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B20 - Wifi - Bluetooth 4.0 - USB OTG ´GPS na aGPS
Atụmatụ ndị ọzọ Mmegharị ihuenyo na mkpịsị aka mkpịsị aka
Batrị 3050 mAh wuru na-abụghị nke mbughari lithium polima
Akụkụ 143 x 71 x 7 mm
Ibu ibu 158 grams
Ahịa Euro 161'29
Ihe kacha mma nke Bluboo XTouch
N'etiti njirimara kacha mma ma ọ bụ arụmọrụ m ga-achọ igosipụta nke a Bluboo XTouch, ewepu ya irresistible na ihe karịrị mpi price, Ga-amasị m mata ya mara mma ma mara mma ma mechaa jiri ozu ya siri ike. Ihe eji eme ihe di iche na ihe anyi ji eme n'oge a na eziokwu a na-eche ihe ojoo a.
N'aka nke ọzọ, ihuenyo ya na mkpebi FullHD yana 3 GB nke RAM nchekwa, 32 GB nke nchekwa nchekwa dị n'ime ya na ihe nhazi ya dị asatọ nwere isi nke Mediatek bịanyere aka, mee ka ọ weta arụmọrụ pụrụ iche n'ọnọdụ ọ bụla ma ọ bụ kwa ụbọchị iji ya eme ihe ma ọ bụ gbaa ụdị egwuregwu ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị arọ ya.
N'aka nke aka, enwere ike ịchọta otu n'ime nkọwa kacha mma nke Bluboo XTouch na ya nnwere onwe dị ukwuu nke nwere nnukwu batrị ya na 3050 mAh nke ahụ na-enye anyị ihe dị ka awa ise na ọkara nke ihuenyo were ya n'ogo kachasị ogo ya yana yana njikọ niile enyere.
Ihe kacha njọ nke Bluboo XTouch
Banyere nke kachasị njọ anyị nwere ike ịkọwapụta nke a Bluboo XTouch, na-eche mgbe niile na anyị na-azụ ọnụ maka naanị euro 160, anyị nwere ike ịchọta ya n'ime igwefoto abụọ ejikọtara ọnụ. Igwefoto ụfọdụ na, ọ bụ ezie na ọnọdụ ọkụ dị mma, na-ese foto ma na -ede vidiyo ndị kariri ịnakwere, nke a na ọnọdụ ọkụ dị ala na ime ụlọ na-enweghị ọkụ, eziokwu bụ na ha na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ.
N'aka nke ọzọ, ọ dịkwa mma ịkọwapụta na ọ bụ ezie na njedebe ya dị oke mma ma bụrụ ezigbo mma mara mma, ha abụọ ihuenyo ya na azụ ya anaghị eji teknụzụ mgbochi mkpịsị aka Nke ahụ na-egosi oke iwe na ojiji ụbọchị, ọkachasị azụ ya, nke na mgbakwunye na nsị na mkpịsị aka mkpịsị aka ngwa ngwa, na mgbakwunye, ebe ọ bụ na anaghị emeso ya na nchebe mgbochi, anyị ga-ejikwa ya jiri nlezianya ebe ọ bụ na ọ na-akọcha naanị site na ịtinye ya n'akpa uwe ogologo ọkpa ahụ.
Mfe ịkọchara azụ
Igwefoto na-ahapụ ọtụtụ ihe ịchọrọ na ọnọdụ ọkụ
Ule igwefoto Bluboo XTouch
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Bluboo XTouch, nyocha na nyocha na Spanish
Azụrụ m ọdụ a ma ọ na-enye m oge elekere 3 n'ọtụtụ.
Ọ gaghị ekwe omume iwepụ ya, gbalịa n'ụzọ niile.
Ricardo Vallejo Campillos na-etinye ihe oyiyi dijo
Enwerem otu ma o dikwa egwu.
You nwere ike inyere aka? Know maara ihe kpatara nke a nwere ike ime ya ?????
Zaghachi Ricardo Vallejo Campillos
3000 batrị? Otu ihe ahụ dị ka onye ọrụ ọzọ ... 3 awa nke ihuenyo naanị!
Igwefoto adighi nma…
A ga-enwe ihe ngwọta ma ọ bụ m weghachite ọnụ ya?
Ndewo ebe ahụ! Enwetara m ọnụ na ọ naghị ana m ego mgbe ọ na-agbanye.
Site na ihe niile ị na-ekwu, batrị, igwefoto na ụda…. You chere na ọ ga-aka mma ma ha weghachi ego m ma ọ bụ zitere m ọzọ? kedụ ka ọ jọruru njọ?
Enwetara m otu, nke bụ eziokwu bụ na o nwere ụfọdụ ọghọm nke ndị ị na-etinye ebe ahụ, emegogo m emelitere ugboro abụọ, enwere m olileanya na ọ ga-edozi.
3 awa nke ihuenyo m chere na ọ dị obere!
Igwefoto anaghị arụ ọrụ maka m, agbalịrị m ịgbanye ya ma ana m edebe igwefoto n'ihu kama tụgharịrị (n'ụzọ ọzọ gburugburu), ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele maka ya ( rsantverd@hotmail.com)
Zaghachi Santiago Verduga
Ha egosiputa uzo di nma karia Bluboo Maya. Eziokwu bụ na ọ dị oke mma.